သိန်းမြင့်ဦးဆိုတာ ကျနော်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်း...။ ငယ်ငယ်လေးက ခင်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး..။၆တန်းလောက်ကမှ သိတာ...သူကကျောင်းမနေဘူး...။သူနဲ့ ခင်ရတာကလဲ အဖေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ပါ..။ ကျနော့်အဖေက စစ်ထွက်..သူ့ အဖေလည်းစစ်ထွက်...။
စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေ တစ်ခေတ်ထတော့မှ အဖေတို့ တွေက အလုပ်တူလုပ်ရင်းတွဲကြတာ..။ အဖေ့အထက်မှာ ရာထူးကြီးတာဆိုလို့ 
စစ်မှုထမ်းတွေ ငါးကန်ကြီးတွေနဲ့ ငါးမွေးမြူရေးနဲ့ သားငါးရေင်းဆိုင်တွေဖွင့်တော့ ကျန်တဲ့ သူတွေက အဖေ့လက်အောက်ကချည်းဘဲ...။
လုပ်ငန်းသဘောတွေမသိပေမယ့် အဖေခိုင်းသမျှကို လုပ်ရပြီး ဆရာချင်းထပ်နေအောင်ကြားရတယ်။ အဖေက သူတို့ လုပ်ငန်းမှာ ဆရာဆိုတော့ သူတို့ သားသမီးတွေကပါ အလိုလိုနေရင်း ကျနော်တို့ အိမ်မှာ ကူဖော်လောင်ဖက် လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းတဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်လာတော့တာဘဲ..။ မဆလ လမ်းပေါ့...။
အဖေက လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းပေမယ့် ကျနော်တို့ နဲ့ သိပ်မခွဲခြားပါဘူး...လုပ်လည်းအတူတူစားလည်းတူတူပါဘဲ...။
သူနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုဘက်တွေ လက်အောက်ကလူတွေနဲ့ ကလည်း မိတ်ဆွေရဲဘော်တွေလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံတော့ လူချစ်လူခင်တော့ပေါတယ်...။ သူ့ မိတ်ဆွေတွေကိုယ်တိုင်က အဖေ့ကို ကူညီဘို့ သူတို့ ကလေးတွေကို အဖေ့ဆီလွှတ်ပေးတာပါ..။
သိန်းမြင့်ဦးက ခင်ဘို့ ကောင်းတယ်..သူ့ ကိုတွေ့ ရင် ကျနော်က ၇ယ်ချင်တာ..။ သူ့ မှာ အားနည်းချက်က မျက်လုံးတစ်ဖက်တိမ်စွဲနေတာရယ်...စိတ်က သိပ်မပြည့်တာရယ်ပါ...။ ရိုင်းပျစွာ ရေးရရင်တော့ နည်းနည်းဂေါက်နေတာပေါ့...။
ဂေါက်တာက စစ်ဂေါက် ဂေါက်နေတာ...။
အမြဲတမ်းစစ်အကျီင်္နဲ့စစ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားတယ်...။
အဖေက တစ်ခုခုခိုင်းဘို့ (သို့ မဟုတ်) အလုပ်တစ်ခုလုပ်စရာရှိရင် ကျနော့်ကို သွားခေါ်ခိုင်းတာ...။သူ့ အိမ်ကဝေးတော့ ကျနော်က စက်ဘီးနဲ့ သွားတာ...။ဟိုရောက်လို့ သူ့ ကိုတွေ့ ရင် အဖေခေါ်နေတယ်လာကွ ဆိုပြီး...ခေါ်ရင် စက်ဘီးကို နောက်က တက်မစီးဘဲ
ပြေးလိုက်တာ...။ ကျနော်က အားနာတယ်..သူကျနော်တို့ ကျွန်မဟုတ်ဘူး...မင်းအဲလိုမလုပ်နဲ့ ကွာ စက်ဘီးပေါ်တက်ဆိုလည်း မတက်ဘူး...ကိုယ်ကပါအားနာပြီး စက်ဘီးမနင်းဘဲ လမ်းအတူလျှောက်ရော....
ဟော..အိမ်ရောက်တော့ သွားတာလာတာ ကြာတော့ ကျနော်က ဆူခံရရော....။
သိန်းမြင့်ဦးကတော့ အိမ်ရောက်လို့ အဖေ့တွေ့ တာနဲ့သတိအနေအထားနဲ့ ဆလု ရိုက်တော့တာဘဲ...။
သတင်းက ပို့ သေးတယ်...
“ သိန်းမြင့်ဦး...ရောက်ပါပြီ ဆရာကြီး အပါကြီး” တဲ့ ...။
“အေး...သက်သက်သာသာနေပါ..ရဲဘော်သိန်းမြင့်ဦး” တဲ့ ...ကြည့်ဦး။ သူတို့ ကတော့ ကိုက်နေတာဘဲ..။
ကိုယ်ဘဲ ကြားက ဆူခံထိတာ...။
အဖေခိုင်းတာကလည်း ပင်ပင်ပန်းပန်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး...။ သစ်ပင်စားပင်စိုက်ဘို့ ကျင်းတွေ မြောင်းတွေ တူးတာ...။တူးရင်လဲ အဖေပါကိုယ်တိုင်တူးတာပါ...။
တစ်ခါတစ်လေတော့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေကိုလွှတ်ပြီး စာပို့ ခိုင်းတာတို့ မနက်အတွက် အစီိအစဉ်ပြောခိုင်းတာတို့ ပါ...။ ကျနော်တို့ ခိုင်းလည်းရပေမယ့်...သူ့ ကိုခေါ်ထားပြီး သူ့ အတွေအကြုံနဲ့စစ်အကြောင်းတွေ ပြောကြတာပါဘဲ..။
သိန်းမြင့်ဦးကလည်း စစ်သားတွေအကြောင်း မေးမှမေး...။ပြောမှပြော...။
သူက စစ်သားသိပ်ဖြစ်ချင်တာကိုး....။ ကျနော်ကတော့ သူတို့ နဲ့ အလုပ်အတူလုပ်လည်း ခပ်ခွာခွာဘဲ...။ ငယ်တုန်းကတော့ အဖေကစစ်သားဖြစ်ခဲ့ တာကို သိပ်အားကျတာ...။ ကျနော်စိတ်က တစ်မျိုးဘဲ...စကားမစပ်ပြောရမယ်ဆို ကျနော်တို့ မြို့ မှာ သတင်းရုပ်ရှင်တို့ ဗဟိုရုပ်ရှင်တို့ လာပြတတ်တယ်...။ အဲဒီမှာ ဘာကြည့်ရလဲဆိုတော့ ဦးနေ၀င်း နိုင်ငံခြားသွားတာတွေ ဧည့်ခံပွဲတွေ မှတ်တမ်းအဖြစ်ပြတတ်တယ်...အဲဒီမှာ ဦးနေ၀င်းကြီးက အရက်ခွက်ကိုင်ပြီး ပါတိတ်အကျီနဲ့ ကနေတာကို တွေ့ ကတည်းက စိတ်ထဲမှာ
တစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားတာဗျ...။ကျနော်သိတာက ပါတိတ်အပွင့်တွေကို အမျိုးသမီးတွေ ထမီအဖြစ်ဝတ်တာဘဲတွေ့ ဘူးတာကိုး...။
တစ်ဖက်ကလည်း သခင်သန်းထွန်းစာအုပ်ကို ဖတ်နေပြီဆိုတော့.....။ ထားပါ..ပြောချင်တာက သိန်းမြင့်ဦးပါ..။
နောက်နှစ်တွေမှာလည်း သိန်းမြင့်ဦးက စစ်သားဘ၀ကိုဘဲ အိမ်မက်နေဆဲပါဘဲ...။
စစ်အကျီနဲ့ စစ်ဦးထုပ်လေးနဲ့ ပါဘဲ...။
နောက်ပိုင်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာအတွက် မိဘတွေအရိပ်ကနေ ထွက်ခွာပြီးတဲ့ နောက်.....အားလုံးကို သတင်းပြတ်နေခဲ့ တာပါ...။
၁၇ နှစ်ကြာမှ မိဘရင်ခွင်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ တယ်...။
ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သူတို့ ဘ၀တွေနဲ့ ရုန်းကန်နေကြတာပါဘဲ...။ သူငယ်ချင်းတွေဆီ လိုက်လည် နုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျနော် သိန်းမြင့်ဦးကို သတိရတာပါ...။
ကျနော်မေးမှ သူငယ်ချင်းတွေက ပြန်ပြောပြတယ်...။
သိန်းမြင့်ဦးက နောက်ပိုင်းပိုဆိုးလာတဲ့ အကြောင်းပေါ့...။
ပါတ်ဝန်းကျင်ကလဲ မကောင်းဘူး....။ စတာနောက်တာလွန်တယ်...။
နဂိုကမှစစ်သားဖြစ်ချင်နေတဲ့ သူ့ ကိုတွေ့ ရင် ဆလုရိုက်ပြီး...
“ ဗိုလ်ကြီး သိန်းမြင့်ဦး ဘယ်သွားမလို့ လဲခင်ဗျား” ဘာညာလုပ်ကြတာ...။
အဲဒီလိုလုပ်တာကြာတော့ သိန်းမြင့်ဦးက သူ့ ကိုယ်သူ တစ်ကယ့်စစ်သားစစ်ဗိုလ်ထင်လာတော့တာပါဘဲ...။
နောက်ပိုင်း ဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆို လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကိုသူဝင်သွားလို့ ဆိုင်မှာ ထိုင်နေသူတွေက သူ့ ကို နုတ်မဆက် ဆလုမရိုက် အလေးမပြုရင်...
“ ဟေ့ကောင် မင်းကဘာလဲ...ငါလာတာမသိဘူးလား” ဘာညာလုပ်တတ်လာတယ်...။
သီးမခံတတ်တဲ့ လူ၊ အကြောင်းမသိသူတွေနဲ့ တွေ့ တဲ့ အခါ ထိုးပွဲတွေ ဘာတွေတောင် ဖြစ်လာတယ် ဆိုဘဲ...။
တစ်ချို့ ကလည်း အရင်က နားလည်ပေးပြီး သနားကြပေမယ့် သိပ်လွန်လာတော့ ကြည့်မရကြတော့ဘူး...။
အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်တယ်ဘဲ ပြောရတော့မယ်...။
သူကလည်းလွန်လာတယ်...။ သူလာတာလှည့်မကြည့်ဘဲ ထိုင်နေရင် သူလာတာမသိရကောင်းလား၊ အရေးတစ်ယူမလုပ်ရကောင်းလား
ဆိုပြီး နားရင်းဝင်ရိုက်တာတွေဘာတွေ လုပ်လာတာ...။
သူက အစစ်အမှန်မှမဟုတ်တာ...ဘယ်နေရာပေး ဆက်ဆံချင်ပါ့မလဲ..။
ပြဿနာတွေ တက်လာတော့ ဘယ်သူမှ ၀င်မတားနိုင်ဘူး...သိန်းမြင့်ဦးကိုလည်း တားမနိုင်တော့ဘူး..။
ပိုဆိုးတာက ရွှေရောင်ငွေရောင် ရွှေစက္ကူတွေကို ကြယ်ပုံတွေ ကပ်ကြီးနဲ့ ညှပ်ပြီး စစ်အကျီရဲ့ လက်မောင်းတွေ ရင်ဘတ်တွေမှာ နေရာအနှံ့ ကပ်တော့တာ...။ပြီးတော့ အကျီကိုမချွတ်တမ်းဝတ်ထားတာ...လျှော်လဲ မလျှော်၊ လဲလှယ်ဝတ်တာလဲ မလုပ်တော့ သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးက နံစော်နေတာပေါ့...လူတောထဲတိုးဝင်ရင်လူတွေက နှာခေါင်းရှုံ့ ပြီး သူ့ ကို သိပ်အကပ်မခံတော့ဘူး...။
ကိုယ်ကလည်း သူ့ အကြောင်းကြားပေမယ့် ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းတောင်မသိပါဘူး...။
ငယ်တုန်းက ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ သူ့ ကိုတွေ့ ပြီး ကူညီမယ်ဆိုတောင် မလွယ်ပါဘူး...။
စိတ်ကိုကုဘို့ နေနေသာသာ ရေချိုးဘို့ တောင်နားဝင်အောင်ပြောဘို့ မလွယ်ဘူး...။
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ရွှေရောင်တံဆိပ်တွေကပ်ထားတဲ့ စစ်အကျီကိုချွှတ်ဘို့ ပြောရင်တောင် သူက ရန်ရှာချင်တာတဲ့ ...။
ကျနော်က စာရေးမကောင်းလို့ ပါ...ဖတ်လို့ တော့ ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။
ဘယ်သူ့ အကြောင်းမှ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး...ကျနော်ပြောတာမယုံရင် အခုရေးထားတဲ့ စာဖတ်ပြီး မျက်စေ့ ထဲ မြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့..။
တွေ့ ပါလိမ့် မယ်...သိန်းမြင့်ဦးတွေ .....တစ်ပြုံကြီး။
Posted by သစ်နက်ဆူး at 6:51 AM
ကိုဆူးရေ အကိုဆိုလိုချင်တဲ့ပုံစံက အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။
သိန်းမြင့်ဦး ကိုဘယ်လို နားဝင်အောင်ပြောရမလဲ ဆိုတဲ့ အပိုင်းလေးများရှိရင်ဆက်ရေးပါအုံး...
သူ့ကိုပစ်ပယ်လိုက်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပိုဆိုးလာ မှာလေ.. ပုံမှန်လူလိုပြန်ဖြစ်အောင် ဆက်ဆံပုံလေး ဆက်ရေးပါအုံး...
Thein Myint Oo will never beatrue one because he is below avarage.
He should know what he is.
So, Mr.Thein Myint Oosssssssssssssssssssss,
go back where u are from because u r so ridiculous for everyone.
ကိုဆူးရေ... သိန်းမြင့်ဦးတို့အကြောင်း ဖတ်ရတာ စိတ်မချမ်းသာပါဘူး....။ တစ်ယောက်တည်းတောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကစိတ်ညစ်ရတာ.. တအုပ်ကြီးဆိုတော့ ......။
ကိုဆူးရေ ဟုတ်ပါ့။ သိန်းမြင့်ဦးကိုဘယ်လို ပြောရပါ့။
စစ်သား အစစ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို တိုင်းပြည်အကျိုးကို တကယ်လိုလားတဲ့သူ၊ ကိုယ့်နေရာကိုယ် သိတဲ့လူလို့ ထင်မိတာပဲ။ သိန်းမြင့်ဦးက စစ်သားအတုတွေကို အတု ခိုးမိတာကိုး။ ရိုင်းပြီပေါ့..
ကျွန်တော် စက်မှု(၁)၊ စားကုန်မှာလုပ်တုန်းက စစ်ဗိုလ်လူထွက်တွေအများကြီးပဲ။ သူတို့ အရပ်ဘက်ပြောင်းပြီး ၂နှစ်ဆို ယူနီဖောင်းချွတ် အရပ်ဝတ် (မာဖီ) ပြောင်းရတယ်လေ။ များသောအားဖြင့် မပြောင်းပဲ မသိမသာလေးဆက်ပြီး အစိမ်းရောင်ကို ဝတ်နေကြတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲ အစိမ်းဆို လူတွေကြောက်တယ်လို့ထင်နေကြတဲ့ စိတ်ဝေဒနာ (အရူးစိတ်) ရှိနေကြတယ်လေ။ MD ဦးကျော်မြင့်က (သူလဲစစ်ဗိုလ်လူထွက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်တည်ကြည်သူ ခြားခြားပါးပါးထဲကပါ) ခေါ်ယူသတိပေးမှ ရူးသလိုနဲ့ အရပ်ဝတ်ပြောင်းကြတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း ပါးရိုက်လိုက်ရ နားရိုက်လိုက်ရ ဆိုတာကတော့ ထမင်းစားရေသောက်ပဲ။ အဲဒါကို အိုကြီးအိုကန်း ဌာနမှူးအဆင့်ရှိသူတွေက မျက်လွှာချဟုတ်ကဲ့ချင်းထပ်နေအောင်ရိုးကျိုးပြကြတယ်လေ။ လုပ်ခန်းသဘောအရ အထက်အောက်အပြန်အလှန်အဘော ရိုသေလေးစားချင်တဲ့သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ..........။
ကိုဆူးရဲ့ သိန်းမြင့်ဦးက တချိန်က ဝန်းထမ်းလောက ကိုပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။